Isakhiwo sangaphakathi sePortfolio sakhiwo samanje zindlu - I-design yangaphakathi i-villas ye-classic iBucharest - Nobili I-Interior Design, i-studio, i-designer, i-designer, iinkampani, ukuyila, amaxabiso
iiprojekthi Interior uyilo ukuba bafikelele zombini izindlu, nemizi kwakunye zokuhlala, zisoloko wena ezibonisa iindlela zabo zokuphila, ozikhethayo kunye neemfuno kwintsapho nganye. Ucwangciso kunye nokwenza kwendawo yokuhlala yinxalenye yesiqalo eziphambili design yephulo. Sinikezela izisombululo kunye nezindululo 3 D iphumelele imigangatho ephakamileyo, izixhobo kunye neemveliso olunobulunga obuphezulu kakhulu. Iiprojekthi ukusuka ipotifoliyo yethu design imizi, nemizi zodidi ezenziwe lohlobo olungagqibekangaName neenkonzo mihla kuyilo turnkey sangaphakathi e Constanta, Bucharest, Ploiesti, Brasov, Galati.
Ikhasi le-1 kwi-7
Iiprojekthi zeprothifoliyo zakhiwo zangaphakathi zakha izindlu zanamhlanje
inkampani Nobili Design Interior sele iqalile ukuyila iingcamango zomntu zangaphakathi zomntu kunye nezindlu zezindlu zokuhlala kwi-2008. Kuwe, oku akuzange kube ngumsebenzi kuphela, kodwa yingxenye ebalulekileyo yobomi. Amava ethu kunye nezinga eliphezulu lolwazi esinike ithuba lokuba yinto eyaziwayo kakhulu kunye neyona ndawo enkulu kunazo zonke ezidumileyo ngaphakathi zaseRomania. Iprojekthi nganye yoyilo lwangaphakathi iyingqayizivele kwaye ikhethwe ngabomntu ngokuqwalasela ingaphandle kunye nolwakhiwo lwangaphakathi lwekhaya kunye neemfuno zabaxhasi. Kuze kube ngoku, siphumelele ngempumelelo kwiiprojekthi ze-150 uyilo lwangaphakathi lwezindlu zakudala eliphezulu, nemizi kunye umgangatho kwinkonzo yolawulo lweprojekthi phantse 100 thina nithumela lwezincedisi design. Iqela lethu angasebenzisa i zonke izinto kunokwenzeka kunye nobuchwephesha, zonke iintlobo ukuyila weklasiki, yobuciko, ezintsha classical ukuya xhaxhe mihla okanye yaseScandinavia ukwenza yokuphila ikhaya wena. Ukuba uceba ukuthenga iprojekthi design, portfolio ikhoyo imisebenzi eyenziwa inkampani yethu anokukunceda isigqibo isimbo ifanelekileyo indlu yakho okanye iiflethi. izindlu zodidi Classic kunye nezindlu yokugcina umgangatho style Mediterranean Villas mihla, sisebenza zonke iintlobo zezakhiwo kwilizwe lonke, kuqukwa Bucharest, Giurgiu, Brasov, Ploiesti, Constanta, Braila, Tulcea kunye Galati.
Iphothifoliyo yezakhiwo zangaphakathi zendlu zanamhla -Izakhiwo zangaphakathi zakhiwo zase-Bucharest iBucharest - Nobili I-Interior Design